‘Ngokwenza izifundo zami zePhD kwezamafilimu nezomabonakude ngikhethe ukuthula kulekomfa ngezokuxhumana uma kuza kwezempilo ngoba nginabantu bakithi nabangani abaphethwe yilesifo,’ kusho uMboti.
UMboti ukhombise ngesimo esijwayelekile sokuthola lesisifo ngokuba nabantu abaningi othandana nabo. Ukhulume ngendlela endala ebizwa nge“surplus slot model” okuyona ndlela ezama ukuthuthukisa isimo sanamhlanje kubhekwa kakhulukazi izimo ezibhekene nabantu besilisa nabesifazane uma befuna ukuba nomuntu oyedwa abathandana naye. Lezizimo usibiza nge“surplus-slots”.
Abanye abacwaningi baseCCMS abethule ucwaningo lwabo bekukhona uSolwazi Keyan Tomaselli, uNksz Eliza Govender noDkt Lauren Dyll-Myklebust. Bakhulume kakhulukazi ngokufundisa ngesifo ngezithombe noma ngemidlalo begxila esiqubulweni sekomfa esithi iSouth – North Perspective.